Discount EPS furo reropa chubhu tireyi Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
EPS furo reropa chubhu tireyi
Yakagadzwa muna 1998, XIONGYE yakagadzira yekutanga seti inoshanda yekuunganidza ropa chubhu furo tireyi uye otomatiki yekugadzira mutsara zvinobudirira. Isu tinoramba tichiisa pfungwa pachedu pane EPS furu yekupakira kweanopfuura makore makumi maviri. Kuva Mugadziri Wezvinogadzirwa, XIONGYE ichipa ropa rekuunganidzira chubhu furo tireyi ine mhando yepamusoro & mutengo wakanaka iyo yave sarudzo yakasarudzika yevanopfuura 100 vatengi vepasirese.
Furo bvunzo chubhu tireyi dzakagadzirwa neiyo yakakwira density chena furo, uye iine hukuru hukuru hwekuvhunduka kupinza, kurema uremu, hunyoro-chiratidzo, mvura-chiratidzo, uye cushioning mashandiro.
Iyi EPS furo tireyi inoshandiswa kurongedza iyo yekutsvaira ropa rekuunganidza machubhu, inogona kunge iri sutu kune otomatiki kurongedza muchina kuunganidza vacuum yeropa yekuunganidza machubhu. Inonyanya kushandiswa mukiriniki uye muchipatara.
Iko kushanda kweyeyedzo chubhu tireyi kubata iyo yekuyedza machubhu uye kuachengeta munzvimbo yakachengeteka isina kubatwa neruoko.
Kushanda: Centrifuge machubhu, vacuhu eropa rekuunganidza machubhu, Asina-vacuum eropa rekuunganidza machubhu, R1.6 test tube, Conical centrifuge machubhu nezvimwe ..
Hole dhayamita Inowanikwa: 8.4mm, 9.1mm, 12mm, 10mm, 10.8mm, 13.3mm 13mm, 14mm, 14.6mm, 15mm, 16mm
Matsime makumi mashanu nematsime zana ndiwo anozivikanwa zvikuru. Kunze kwemasayizi edu azvino, saizi yakagadziridzwa uye dhizaini zviripo zvakare! Welcome to muvhunzo.
Pashure: EPS Foam Mapakeji
Zvadaro: EPS Foam bhokisi